Hlola iBarcelona, ​​Spain - World Tourism Portal
Hlola iBarazil, Spain
Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Barcelona Spain.
Okufanele ukwenze eBarazil, Spain
Uhambo losuku kusuka e-Barcelona
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBarazil, Spain
Bukela ividiyo ngeBarcelona, ​​eSpain
Ingabe idolobha elikhulu nedolobha elikhulu kunazo zonke laseCatalonia nedolobha lesibili ngobukhulu laseSpain, elinabantu abangaphezu kwesigidi nesigamu (ngaphezu kwezigidi ezinhlanu esifundazweni sonke).
Hlola iBarcelona, ​​etholakala ngqo ogwini olusenyakatho-mpumalanga yeMedithera Spain, inomlando ocebile, njengoba wawungaphansi kwamaRoma, kwase kuba ngumthetho kaFrank ngaphambi kokumemezela ukuzimela kwawo.
Lo muzi omuhle ugcwele lokho amadolobha aseYurophu aziwayo (izimakethe zangaphandle, izindawo zokudlela, izitolo, iminyuziyamu namasonto) futhi kumnandi ngokuhamba nohlelo olubanzi nolwethembekile lweMetro lwezindawo ezikude kakhulu. Isizinda sangaphakathi sedolobha, esigxile eChiutat Vella ("Idolobha Elidala") sinikeza izinsuku zobumnandi kulabo abafuna ukubona impilo yeBarcelona ngenkathi amabhishi idolobha elakhiwe phezu kwalo linikeza ilanga nokuzilibazisa ngezikhathi ezinde zesimo sezulu esifudumele .
(Idolobha Elidala), empeleni liyingxenye yakudala yedolobha futhi libalwa njengeNombolo Yesifunda Yokuqala. Itholakala endaweni ephakathi nogu lweMedithera futhi ingumbuso omkhulu wabavakashi wedolobha. Okuhehayo okuphezulu eCiutat Vella kufaka ukwakhiwa kabusha kweMedrival komakhelwane weBarri Gotic, i-Contemporary Art Museum yeBarca eRaval kanye neMnyuziyamu waseNaval ekugcineni kwendlela yokuhamba egcwele ukuzilibazisa eyaziwa ngokuthi yiLas Rambles.
yaziwa ngokuthi yi- “Modernist Quarter” ngokwakha izakhiwo zayo zesimanjemanje njengeCasa Mila, iThempeli Expiatori nehholo lesifunda lendawo. Igridi yomgwaqo yesifunda iqine kakhulu, ihlukaniswe ngamabhloksi amigwaqo enemigwaqo enwetshiwe kuzo zonke izindlela ukuvumela ukubonakala okukhulu.
itholakala enyakatho-maphakathi neBarcelona enyakatho ne-Eix samp. Kwakuyidolobha elihlukile, elasungulwa e-1626 njenge-Our Lady of Grace Convent. Ijoyine iBarcelona kuphela kwi-20th Century futhi igcina isikhundla sayo
itholakala eceleni kweMedithera emaphethelweni aseningizimu yeBarcelona. Phambilini bekungumasipala ohlukile ogxile eSants, kepha kufaka nechweba kanye nemboni yezimboni ebizwa ngeZona Franca kanye nengcebo yeminyuziyamu kanye nezigodlo. Kukhona njalo imikhosi kanye nemikhosi kule ngxenye yeBarcelona.
emaphethelweni empumalanga yedolobha, uqanjwe ngegama lebandla lokuqala elakhiwe endaweni- iSt Martin's.
Izindawo ezinjengeSarrià, i-Pedralbes, iHorta ne-Sant Andreu zikumema ukuba uphume endleleni eshaywayo bese usuka ezixukwini zezivakashi.
Izimo eziqondile zokusungulwa kwedolobha laseBarazil aziqinisekile, kodwa izinsalela zokuhlala izinkulungwane zeminyaka eziningi zitholakele endaweni yaseRaval. Ngenkathi inganekwane inobaba kaHannibal owasungula iBarcelona nge-3rd Century BC, abukho ubufakazi obuphathekayo.
Idolobhana laseBarcelona linesimo sezulu esiphambili saseMedithera esinezimo zasebusika ezishisayo nezinomswakama kanye nehlobo elishisayo nelomile.
I-Barcelona-El Prat International Airport, iyindawo enkulu yokuhamba nezindiza ezweni lonke elaseYurophu nangale.
Yini okufanele uyibone e-Barcelona, ​​eSpain.
Okufanele ukwenze eBarazil Spain
Imikhosi nemicimbi e-Barcelona
Thatha uhambo lokuhamba ngezinyawo
Kulabo bavakashi abafisa ukuthola ukunambitheka kwangempela kweBarcelona, ​​ungajoyina iqembu lamahlahlandlela endawo akhuluma isiNgisi ohambweni lokubona mahhala. Ngokungezelela ukuthola izimpawu ezinkulu zemigwaqo nemigwaqo edumile, uzothola nezindaba, izincomo kanye namathiphu angahlinzekwa yindawo kuphela. Lezi ziqondisi ezisebenzayo zinothando ngedolobha lazo futhi zinikeza izinkambo ezifundisayo futhi ezimnandi. Lezi izinkambo zokuhamba zisuselwa kwinkonzo esekelwa yipiphu.
Kukhona futhi izinkambo eziqhutshwa nguMkhandlu Wedolobha kusukela endaweni yokuvakasha yabavakashi ePlaça Catalunya.
Enye indlela yokuthola uhlangothi lwe-Barcelona yendawo ukuxhumana nomuntu wendawo, ozimisele ukukukhombisa idolobha elizungezile. Ungakhetha umhlahlandlela wokuhamba ngokuya ngezinketho zakho zomsebenzi wokuhamba. Umhlahlandlela wokuvakasha wasendaweni ungakukhetha endaweni yakho, uthathe izithombe ezinhle zokuhamba, uyothenga noma ubonise izindawo okungezona izivakashi uma ufisa ukuzibona.
I-Barcelona ine-35,000 yezitolo ezimangazayo izivakashi ezingazihlola, kepha njengoba kungekho noyedwa ongathemba ukuthi izothenga i-Barcelona ngokugcwele, "isiqondisi sabathengi" sihlelekile. Okokuqala, uzofuna ukuhamba “umugqa wokuthenga” ongamakhilomitha amahlanu osuka eceleni kwendlela yabahamba ngezinyawo eLas Ramblas. Kukhona ithrafikhi encane kakhulu yezimoto kulesi sigameko, yize kuzoba khona inala yabanye abavakashi ukuzulazula lapho. Endleleni, uzothola izitolo eziningi ezithengisa izinto “ezinamagama amakhulu” kanye nezitolo eziningi ezikhethekile zokwakha ezithengisa izembatho ezenziwe eSpain, izicathulo, ubucwebe nokuningi.
Iningi lezitolo nezindawo ezinkulu e-Barcelona zizovalwa ukuze zisebenze ngamaSonto, kepha kukhona okuhlukile- ikakhulukazi eCiutat Vella. Lapho, uzothola izitolo zemfashini ezifashini; izitolo ezincane zesikhumbuzo nezitolo ezinkulu zendawo zivulwa iviki lonke.
Amanye amathuba amahle kakhulu wokuthenga alindele isivakashi eBarazil afaka lokhu okulandelayo:
Ama-antique amahle angabanjwa e-Barcelona uma wazi ukuthi ubheke kuphi. Emgwaqweni obizwa ngePasseig de Gràcia esifundeni i-Eix samp ufakwe ezitolo zakudala. Kukhona nezinye eziningi ezitholakala eduze kweCarrer del Consell de Cent (futhi e-Eix samp) naseCarrer de la Palla eduzane neCathedral.
Izimakethe ezimbili zezinhlaka kufanele sikuhlole: eyodwa ibanjwa njalo ngoMgqibelo ekuseni eduze kwesikhumbuzo seColum (Christopher Columbus) ekugcineni kweLas Ramblas nelinye esigcawini ngaphandle kweBarthol Cathedral, esivulwe ngoLwesine ekuseni.
Isitolo somnyango i-El Corte Inglés sinezindawo eziningi kulo lonke leli dolobha, kufaka phakathi i-Eix samp, iCiutat Vella 'kanye ne-Inland Suburbs. Enkabeni yedolobha, kunezindawo ezimbili ze-El Corte Ingles ezingaphakathi kokuhamba okulula komunye nomunye, futhi isitolo somnyango Fnac siseduzane. Lezi zitolo zikhulu kakhulu futhi zinayo cishe yonke into okungenzeka uyothenga kuyo, yonke ngaphansi kophahla olulodwa.
ILa Boqueria yimakethe yomphakathi ebabazekayo etholakala eCiutat Vella. Kuyafaneleka ukuthi kuhlolwe ngobubanzi bayo obukhulu bokukhiqiza kanye nezimpahla, futhi ungayeka ukuthola isiphuzo sezithelo esisha noma esinye isiphuzo lapho uthenga. Yazi ukuthi imakethe ivala ngamaSonto. Futhi, qaphela ngenkathi uthinta umkhiqizo we-chocolate lapha noma wena bazokuphoqa ukuthi ukhokhele.
IJamon Iberico, isando eselaphekiwe saseSpain esine-flavour ecebile futhi enempilo, siyinto ethandwa kakhulu phakathi kwabavakashi kanye nabendawo. Le ham yenziwe ngePata Negra, uhlobo lwasendulo lwengulube yomdabu e-Iberian Peninsula (Spain kanye nePortugal).
ILa Gauche Divine iyisitolo esiyingqayizivele, esinezinto eziningi esifundeni saseCiutat Vella esihlanganisa imfashini ephezulu, umklami, umculo wezobuciko nobungcweti.
I-Barcelona idolobha elinezinkanyezi ezingaphezu kwe-20 Michelin kuzo zonke izindawo zokudlela zalo. AmaCatalans ayaziqhenya ngokudla okukhulu, okugxilwe emlandweni weminyaka nasemikhiqizweni emisha. Kodwa-ke, cuisine ye-Barcelona ayihambelani nekhwalithi, njengawo wonke amadolobha ahambela izivakashi kakhulu, kepha ukudla okuhle kuyatholakala ngamanani afanele. Umthetho wegolide wesithupha usebenza kahle e-Barcelona; ukonga imali futhi uthole ukudla okungcono, funa izindawo ezingekho lapho uhamba ngethrekhi eshaywayo yizihambi ezinye futhi ufune amakhofi nezindawo zokudlela lapho abantu bendawo bevame khona. Umqondo omuhle ukugwema izindawo zokudlela ezinama-tout ngaphandle.
Izindawo eziningi zokudlela nezindawo zokudlela zamahhala zivaliwe phakathi kwe-4PM ne-8PM ye-migdiada. Uma wehlulekile ukuhlelela lokho, nazi ezinye izindawo ongazidla ngalesi sikhathi:
ama-tapas emigoqo (awaphilile kakhulu futhi awabizi kakhulu ukufaka ukudla okugcwele)
izindawo zokudlela ezikhethiwe ezivumelana nezimo ngokwanele ukuba zanele izivakashi usuku lonke.
Setha amamenyu (menú del dia) Izindawo zokudlela eziningi (kanye nemigoqo ethile) zinikeza i-menú del dia (imenyu yosuku), okuvame ukuthi kusho ukuthi ukudla okuyisisekelo okulula nokungathembeki kabili (isaladi elilodwa, isidlo esikhulu nesiphuzo; ), I-3 noma i-4 zikhetha ngakunye, ngesiphuzo nangoshukela, kuya ngendawo yokudlela. Khumbula ukuthi lezi akuzukuba izingxenye ezinkulu. Ngokujwayelekile uzothola zonke izinto ezifakwe kuhlu, kepha zizoba ngumlomo owodwa noma emibili okungenani (okusho, konke ukudla kuzokwanela epuletini elilodwa elisayizi). Phakathi nesonto, ezinye izindawo zokudlela ezi-smart zihlinzeka ngezinto ezikhethekile zasemini ezivela ku-2PM ziye kwi-4PM. Isihambi esijikelezayo siyozama izindawo ze-hip ngengxenyana yentengo phakathi nosuku.
Ukubhema: Akuvunyelwe ezindaweni zokudlela.
Ukukhetha kwe-butiffara, ubhontshisi, nenye inyama kusuka ekudleni okuvamile ezweni lamaCatalan
Ungathola ukudla kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba eBarcelona, ​​kepha qiniseka ukuthi uzama okunye ukudla kwesiCatalan.
Ukukhethwa kokudla kwasolwandle kukhulu ngokuhle, yize kungeyona eningi yakhona (le ngxenye yeMedithera iphume kahle).
Indlela yokuzama ukuthi kungashiwongozi ngezinkomba zokuhamba kungama-waffles athengiswa ezitratweni zomgwaqo. Bazokulinga ngephunga labo lokunambitheka komlomo nokunambitha.
Uma ufuna isingeniso esisheshayo sokudla kweBarcelona, ​​ungacabanga ngokuhambela uhambo lokudla - i-wayini, ukuvakasha kwe-tapas, amakilasi okupheka, ukuvakasha kwemakethe ... izinketho ziningi kanti ingxenye enzima ukukhetha eyodwa.
Izinketho zobusuku baseBarcelona abupheli. Kunamaklabhu nemigoqo ehlanganisa yonke imigwaqo eyodwa, futhi ungathola abantu bejabulela isiphuzo ngaphandle kungaba semgwaqweni, eplaza, noma ogwini. Isigcawu esiphawulekayo sekilabhu yileso esidonsa izinhlaka eziningi edolobheni. Izindawo ezingcono kakhulu zokuthola ibha yi-El Born, El Gotico, ne-El Raval.
Zama “i-cafè amb gel” i-espresso enothosi wobisi olunikezwe ngengilazi yama-ice cubes ohlangothini kunoma iyiphi 'indawo yokudlela' yasendaweni
I-Barcelona idolobha elinefa elingapheli lababhiya newayini bendawo. Eqinisweni, ineziphuzo ezihlukile zezinye izinhlobo futhi, ezinjenge-orxata okuyisiphuzo esenziwe ujusi we-chufa (papyrus), ushukela namanzi kanye ne-granizados, equkethe ujusi wewolintshi omnandi, ujusi kalamula noma ikhofi elithululelwe ngaphezulu iqhwa elichotshoziwe. Ngokuqondene notshwala, kodwa, lezo eziphuzwa kakhulu e-Barcelona zihlanganisa:
I-Cerveza (ubhiya), isitayela saseSpain. Yazi ukuthi, uma ucela "i-caveza," uzonikezwa ubhiya obusebhodleleni. Ukuze uthole ubhiya ongakapheli, kufanele ucele "une caña."
I-Vermuth al grifo, iwayini le-herbal eligcinwa emigqonyeni enosayizi omncane futhi lihlanganiswe namanzi aerated ngaphambi kokuphuza.
I-Cava, inhlobo ye-champagne ecwebezelayo enemibala ethe xaxa futhi “eluhlaza” kune-champagne yaseFrance. Imikhiqizo emikhulu ifaka phakathi: iCodroniu, iFreixenet neRaimat.
I-Moscatel, iwayini elimnandi ngokwemvelo elinephunga elimnandi elingama-85% kusuka kuhlobo lwegilebisi laseMoscatel de Alejandria. Igcotshwa kangcono amakhilogremu amancane futhi ashayeke ngaphezu kwama-dessert amaCatalonia / aseSpain ahlukahlukene kanye nezithelo no-ayisikhilimu.
I-Barcelona inenamba enkulu yazo zombili imigoqo yobhiya nemigoqo yewayini, futhi kukhona izikhungo ezinqamula umugqa ziphindwe kabili njengoba zombili. Ukuthi izivini zeviniga zewayini zasePenedes kulele kuphela kumamayela ambalwa e-Barcelona kuyachaza, ngokwengxenye, ukuthi kungani imigoqo yewayini ingumbono ovamile kuleli dolobha.
Khetha i-ATM endaweni ematasa bese uhlangana masinyane esixukwini ukuze ugweme ukuqondiswa. IBarcelona ifakwe kahle ngama-ATM. Amaningi anikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene (ukuhoxiswa, ukudluliselwa, ukukhokhiswa kwemali yeselula, ithikithi, njll.) Futhi amukela amakhadi wesikweletu emabhange ahlukahlukene.
Ama-ATM amaningi ngeke akukhokhise imali yokuthi ukhiphe imali (yize ibhange lakho lisahle). ICatalunya Caixa ihlukile: bazokhokhisa imali ethile ye-euro, ngakho-ke gwema ama-ATM abo.
I-Figueres - Ikhaya lemnyuziyamu elihlaba umxhwele kakhulu laseSalvador Dalí.
Montserrat - vakashela isigodlo esinezindawo eziphakemeyo ezintabeni ukuze ubone iMadonna emnyama noma intaba ukuya esiqongweni ukuze uthole umbono omuhle ngendawo ezungezile. Amamayela angama-30 ukusuka e-Barcelona.
Sitges - Indawo yendabuko yasolwandle ngasendaweni. Kugcwele izitolo zemfashini ezivulwa ngamaSonto. Indawo eyaziwayo yisitabane.
Girona - Idolobhana elinokuthula elinesigaba sasendulo samaJuda, imigwaqo emincane, izindonga ezibekekayo nezindawo zokudlela eziningi zamakhekhe.
I-Tarragona - Idolobha lokuqala elikhulu lolwandle eningizimu yeBarcelona. Idolobhana linikeza inani elikhulu lezindawo zomlando - i-UNESCO World Heritage - kufaka phakathi i-colosseum yamaRoma eligcinwe kahle, kanye neTarragona Cathedral.
Ama-Pyrenees - Intaba ibanga cishe amakhilomitha angama-150 ukusuka enyakatho nedolobha.
Ama-Sant Cugat del Valles - Inomunye wamakhemikhali othakazelisa kakhulu waseRoma waseCatalunya, onemidwebo eminingi ehehayo. Idolobha uqobo lwalo ligcwele ama-vilas abizayo.
EMontseny - UNESCO Biosphere Reserve 40 km enyakatho mpumalanga yeBarcelona. Iya lapho ngemoto noma ngebhasi / ngesitimela.
Hlola iBarcelona kanye futhi uzoyithanda kuze kube phakade…